जो नेस्बे र उनको डाक्टर प्रोक्टर। बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि धेरै रमाइलो। | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, किताबहरु, युवा साहित्य
जो Nesb by द्वारा बच्चाहरूको पुस्तकहरू। डाक्टर प्रोक्टरको एडभेन्चर।
उत्तम उपहार को लागि Magi को बच्चाहरु शरारती, कल्पनाशील र राजनीतिक गलत9र १२ बर्ष। किनभने जो नेस्बे, विधा को Norse मास्टर, उनीहरूको लागि पनि लेख्नुहोस्। र उनी यस्तै क्षमताको साथ मनोरन्जन गर्न, डराउने र हुक गर्ने आफ्नो वयस्क उपन्यासहरूमा गरे। सजिलो पढ्नकाे लागि, कल्पना, प्रेम, आतंक र रोमांचले भरिएको, उहाँको मेरो नम्र सिफारिस त्यो फरक पठन उपहारको लागि र to देखि years9वर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि उपयुक्त।
यो वर्ष श्रृंखलाको पहिलो शीर्षक को प्रकाशनको १० औं वार्षिकी मनाउँछ डाक्टर प्रोक्टर। तर त्यहाँ पहिले नै5छन्, भर्खरको र यस पलको लागि मात्र नर्वेमा जारी भयो। यहाँ बाल साहित्य प्रकाशक छ ग्यालरी एक जो तिनीहरूलाई प्रकाशित स्पेनिशमा। उनीहरूले यो पनि राखेका छन् हटिंग तर उत्कृष्ट चित्रहरु नार्वेजियन संस्करणबाट मूल। तिनीहरूलाई खोज्नुहोस्। तिनीहरूले तिमीलाई चकित पार्छन्.
जो नेस्ब्ले यी उपन्यासहरू लेखेका थिए जब एक दिन उनको छोरी सेल्मा उहाँलाई एउटा कथा बताउन उनलाई सोधे त्यहाँ एक पागल शिक्षक थियो, एक धेरै धेरै सानो बच्चा (त्यस समय सेल्मा, सात वर्षको उमेरमा, बच्चाहरूदेखि केहि डराएकी), एक धेरै राम्रो र मेहनती केटी र एक डायनासोर। डायनासोर चीज मात्र बाँकी थियो।
यसैले, डाक्टर प्रोक्टर एक छ राम्रो निराला आविष्कारक र पनि धेरै साहसी y प्रेमी. Lise, Selma Nesbø को एक अहंकार, केटी छ आज्ञाकारी र लगनशील। ऊ छिमेकीको लागि छ प्लग, बच्चा सानो, रेडहेड, शरारती, धेरै झूट तर धेरै रमाइलोसम्भवतः सबै कथाहरूको साँचो पात्र। A लघु ह्यारी प्वाल, उही संग राजनीतिक गलत, समस्यामा फस्न सक्ने क्षमता y अपरंपरागत रिजोलुसनहरू कठिनाइहरूको सामना गर्दै
De चिकित्सक प्रोक्टर र tirapedo पाउडर.
ती तीनजनाको प्रशंसक र पागलको रूपमा हुने साहसिक चीज हुनेछ जुन पाउडरको आविष्कारले विशाल फोर्टहरू उत्पादन गर्दछ, तिनीहरू जादूको बाथटबको लागि समय-समयमा यात्रा गर्नेछन्, उनीहरूले संसारको विनाशबाट बच्नेछन र तिनीहरूले रहस्यमय डकैतीको समाधान गर्नेछन्। नैतिक वा ड्याडेक्टिक इरादा बिना स्पष्ट, यदि तपाईं मा मानहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ amistad, the माया बढी रोमान्टिक र बलिदान, द सामाजिक र राजनीतिक आलोचना वा कल्पना को शक्ति। लेखकको सबैभन्दा शर्त पनि आफ्नो वयस्क काम गर्न हडबडी भेट्टाउनेछ र पक्कै आफ्नो स्वर चिन्न।
1 डाक्टर प्रोक्टर श्रृंखला
1.1 चिकित्सक प्रोक्टर र tirapedo पाउडर
1.2 डाक्टर प्रोक्टर र समयको बाथटब
1.3 डाक्टर प्रोक्टर र संसारको अन्त। कि हैन।
1.4 डाक्टर प्रोक्टर र ठूलो डकैती
2 किन तिनीहरूलाई पढ्नुहोस् र तिनीहरूलाई दिनुहोस्
डाक्टर प्रोक्टर श्रृंखला
चिकित्सक प्रोक्टर र tirapedo पाउडर
ती पात्रहरूले हामीलाई परिचय गराउँछन्, तिनीहरूका परिवारहरू, जहाँ तिनीहरू बस्छन्, उनीहरूको स्कूल र उनीहरूका साथीहरू। हामीलाई निराशाजनक डा। प्रोक्टर थाहा छ, जसले लामो कस्टर्ड मन पराउछ र सबै प्रकारका चीजहरू आविष्कार गर्दछ। एक तप, सानो कपाल भएको केटो, जो आफ्नो परिवारको साथ कालेज डे लस क्यानोनस सरेका छन्, जहाँ लाइसे बस्छन्। र ती तीनजनाले केहि सामना गर्न योजना गरे दुष्ट जुम्ल्याहा Lise र Tapon स्कूल बाट। थप रूपमा, त्यहाँ एक लुगा पनि छ कन्स्ट्रक्टर सर्प ओस्लो शहरको ढल मार्फत, कथाको अन्त्यमा धेरै महत्त्वपूर्ण।
के कुरा उल्लेखनीय छ कि त्यो छ कथावाचक हस्तक्षेप गर्दछ धेरै पटक ठेगाना गर्न सीधा पाठकहरूलाई। उनको हास्यास्पद टिप्पणी अझै बनाउँछ बढी रमाईलो पढाइ।
यो पहिलो शीर्षक सिनेमामा अनुकूलित एन 2014।
डाक्टर प्रोक्टर र समयको बाथटब
पुस्तक हो अधिक विस्तृत। कल्पनाको अपशिष्ट बाहेक, हामी फेरी समय मा फिर्ता लिन्छौं जुन एकदमै छ ईतिहास पाठ विश्वव्यापी यस पटक डा। प्रोक्टर एक स्वास्थ्य लाभ युवावस्थाको पुरानो माया जुन हराउँछ र Lise र Tapon तपाईंलाई यो फेला पार्न मद्दत गर्दछ। तर हराएको प्रेम फेला पार्न उनीहरूले समयको प्रयोग गरेर यात्रा गर्नुपर्नेछ एक जादू बाथटब। तिनीहरू टुर डे फ्रान्स मा देखा पर्नेछन्, तिनीहरूले एक खैरो खुट्टा र स्केटबोर्डको साथ एक पापी महिलालाई भेट्नेछन्, एक नेपोलियनएक आर्कको जोन, युद्ध, मृत्यु र सबै भन्दा माथि प्रेमको शक्ति।
डाक्टर प्रोक्टर र संसारको अन्त। कि हैन।
सायद स्पष्टसँग यो हुन सक्छ निरंकुशताको कडा आलोचना, सांस्कृतिक अज्ञानताको साथ उनीहरूलाई सम्बद्ध गर्दै। टेलिभिजनमा गाउने बजाउने प्रतियोगिताले सम्पूर्ण देशलाई सम्मोहित बनाउँछ र मानिसहरूले हिज्जे गल्ती गर्न थाल्छ। गाउने निर्देशकले नर्वेको राजालाई खारेज गर्‍यो र आफैलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्‍यो। डा। प्रोक्टर, लीज र तपिनले यो सबै किन हुन्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।
डाक्टर प्रोक्टर र ठूलो डकैती
साहसिक कालो सबै को। धेरै खतरनाक चोरहरूले नर्वेको बैंकको एकल सुनको पट्टी चोरेका छन्। राजाले तुरुन्तै यसबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिए। संसारलाई बचाउनको लागि सफल हस्तक्षेपका लागि, उहाँ डा। प्रोक्टर, लाइज एण्ड प्लगलाई बोलाउनुहुनेछ। त्यसोभए, लुटेराहरू इ England्ल्याण्डमा छन् भनेर पत्ता लगाएपछि, तिनीहरू लन्डनको लागि यात्रा गर्नेछन्। त्यहाँ तिनीहरू सबै प्रकारका साहसिक कार्यमा सामेल हुनेछन् जसले तिनीहरूलाई डिलमा डोर्‍याउँछ संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति, the फुटबलर सबैभन्दा महँगो संसारमा र फुटबल अंग्रेजी कप फाइनल.
डाक्टर प्रोक्टर र ठूलो डकैती।
किन तिनीहरूलाई पढ्नुहोस् र तिनीहरूलाई दिनुहोस्
किनभने तिनीहरू लामो सासमा पढ्छन्, तिनीहरू मेरो लागि केहि घण्टा टिक्यो। तिनीहरू बिल्कुलै छन् पागल र Nesb touch को स्पर्शको साथ एको बढाइचढाइको साथ भाषा बच्चाहरूको लागि ताजा को रूप मा यो बलवान छ. यसले सहुलियतहरू वा नरम अवधारणाहरू गर्दैन वा अवस्थाहरू। तर सबै भन्दा माथि त्यो छ तिनीहरू धेरै धेरै हास्यास्पद छन्। जे होस्, यदि तपाइँ अझै पनी बच्चाहरुलाई दिने बारे रिजर्भेसनहरु छ भने, उपहार आफैं बनाउनुहोस्। साँच्चै, तिनीहरूलाई सम्झना छैन.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » युवा साहित्य » जो नेस्बे र उनको डाक्टर प्रोक्टर। बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि धेरै रमाइलो।
व्यक्ति अब किताबको बारेमा कुरा गर्दैनन्